Haddii aad qabtid neef, neef-mareenada sambabahaaga (bronchi) ayaa aad ugu dareen badan kuwa caadiga ah, waxyaabo qaarkood ayaa feel-yeelayn kara, kuwaaso gaarsiinaayo xiiqlayn, qufac, xabadka oo adkaado iyo neefta oo kugu adkaato. Waxyaabaha caadi kugu karo neefta waxaa cayayaanka yar, ka ah xayawaanka - ee guriga laga helo geedaha ka soo baxo, qiiqa sigaarka qabow, iyo bukashada xabadka. Calaamadaha boodidda neefta ee aad u xun dhaqsi ah u si xumaadaan.
Haddii ay calaamadaha neeftaada ay ka duwan yahiin kuwa caadiga ah (uusan caadi ahayn) ama aad qabtid calaamado dheeri ah, waxaa laguu gudbin karaa qaybta xray-ga sidii raajo lagaa saaro xabadka. Haddii uu joogto ah kuu , waxaa doonaa inhaler ku jiro miisaanka jirka daawo magacaabo that is qabto inhaled corticosteroid. Caadi ahaan lagula talin inaad qaadatid labo qiyaas maalintiiba oo inhaled sidii hortago in mar labaad dhaco that is kugu.